“ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကြိုးစားမှုက အဓိက” | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| January 17, 2013 | Hits:18,659
| | အမေရိကန်ရောက် ချင်းတိုင်းရင်းသူ အဆိုတော်၊ တေးရေးသူ Milla Hniang (ဓာတ်ပုံ – Milla Hniang / Facebook)
အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ချင်းတိုင်းရင်းသူ Milla Hniang (မီလာ နျမ်း) ကို အမေရိကန် တေးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ Tate Music Group က စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ဒီလ ၈ ရက်နေ့က Milla Hniang အမည်နဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး တေးအယ်လ်ဘမ် ထွက်ရှိလာပါတယ်။ သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့ Milla Hniang ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Milla Dawt Hniang ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သာယာတဲ့ အသံကြောင့် တေးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီက ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အခုထွက်ရှိခဲ့တဲ့ တေးအယ်လ်ဘမ်ရဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးဟာ သူကိုယ်တိုင် ရေးတဲ့သီချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက ပိုလီယိုရောဂါကြောင့် ချိုင်းထောက်ကို အသုံးပြုလှုပ်ရှားနေရတဲ့ Milla Hniang က မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မသန်စွမ်းသူတွေရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတဦး ဖြစ်ချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တေးသီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သီကုံးပြီး ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သီဆိုနေတဲ့ Milla Hniang ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တချို့နဲ့ ရှေ့ဆက်မယ့် အခြေအနေတွေကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ကျော်ခက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို မီလာရဲ့ လက်ရှိ နေထိုင်တဲ့ နေရာနဲ့ မွေးရပ်ဇာတိလေးကို မိတ်ဆက် ပေးပါလား။
ဖြေ ။ ။ မီလာက ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးဇာတိပါ။ ၄ နှစ်အရွယ်လောက်မှာ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းသွားပြီးတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ အဖေကခေါ်တာနဲ့ အမေရိကားကို မိသားစုလိုက် ပြောင်းလာတာပါ။
မေး ။ ။ လက်ရှိ မီလာရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အခြေအနေကို ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့က မီလာရဲ့ အယ်လ်ဘမ်ထွက်ပါတယ်၊ သီချင်းတွေအားလုံးက မီလာ ကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေပါပဲ၊ သီချင်းတွေက Country / Acoustic အဲလို အမျိုးအစားတွေပါ။ အယ်လ်ဘမ် ခေါင်းစဉ်ကို ကိုယ့်ရဲ့ နာမည် Milla Hniang နာမည်နဲ့ပဲ ထွက်တာ။ ဒီမှာက ပထမဆုံး စီးရီးဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့ပဲ လုပ်တာ။ အဲဒါက Promotion အတွက် အရမ်းကောင်းတာလေ။
မေး ။ ။ ဒီလိုအယ်လ်ဘမ် ထွက်ဖို့ အနေအထားအထိ ဖြစ်လာပုံ အခြေအနေကို ပြောပြပါ။
ဖြေ ။ ။ မီလာက သီချင်းဆိုတာ အရမ်းဝါသနာပါလို့ ကိုယ့်ဖာသာရေးတဲ့ သီချင်းတွေကို Youtube ပြီးတော့ Social network တွေထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ အများနားထောင်ဖို့ ထည့်ပေးထားတာ။ အဲဒါကို တေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကနေ ဖုန်းခေါ်လာပြီး သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မေး ။ ။ တေးစီးရီးကုမ္ပဏီက အယ်လ်ဘမ်ထုတ်ဖို့ ကိုယ့်ကို ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ခံစားမိတာက ဘာဖြစ်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ မီလာ အရမ်းပျော်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံတောင်မှ မယုံဘူးဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့က တကယ့် တေးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီဆိုတော့ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ရောက်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးလေ။
မေး ။ ။ အမေရိကန်မှာက သီချင်းအယ်ဘမ်တခုထွက်ဖို့ ခက်ခဲလား။
ဖြေ ။ ။ အရမ်းခက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာက မီလာထက် တော်တဲ့လူတွေက အများကြီးပဲလေ။ အခုလို အယ်လ်ဘမ် တခုထွက်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ခက်ခဲပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရဖို့ ဆိုတာလည်း အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီလာ ကြိုးစားမှာပါ။
မေး ။ ။ မီလာ အနေနဲ့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ရောက်ဖို့ ကြိုးစားရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာမျိုး ရှိခဲ့လဲ။ ရှိခဲ့ရင် အဲဒါတွေ ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ အဓိက တွန်းအားတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ပြောပြပါလား။
ဖြေ ။ ။ ဒီ အမေရိကန်မှာဆိုတော့ အရမ်းခက်ပါတယ်၊ ဒီမှာက သီချင်းဆိုတတ်ရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ Music ကိုလည်း သိဖို့လိုတယ်၊ တီးတတ် ဖို့လည်းလိုတယ်၊ ရေးတတ်ဖို့လည်း လိုတယ်ဆိုတော့၊ မီလာက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဝါသနာပါလို့ ကြိုးစားလာတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီမှာ အရမ်းခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီလာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဓာတ်မကျအောင် အားတင်းပြီး ကြိုးစားတယ်။
မေး ။ ။ ပိုလီယိုရောဂါ ခံစားခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကို နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလား။
ဖြေ ။ ။ ရပါတယ်။ ငယ်ငယ်က တနှစ်မပြည့်သေးတဲ့ အရွယ်မှာပဲ မီလာက ဟားခါးမှာ အဲဒီ ပိုလီယိုရောဂါ ဖြစ်တယ်လေ။ အဲဒီကတည်းက လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။
မေး ။ ။ အခု လှုပ်ရှားသွားလာနေတော့ရော ဘယ်လို သွားလာနေလဲ။
ဖြေ ။ ။ အမေရိကန်မှာတော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ချိုင်းထောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်တယ်။ ဒီမှာက သူများတွေက မီလာကို အမြဲတမ်း ဦးစားပေးပါတယ်။
မေး ။ ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘဝမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ကြုံဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ ရှိတယ်။ (ရန်ကုန်မြို့) မြောက်ဒဂုံမှာ ၂ တန်းအထိ နေခဲ့ဖူးတယ်၊ ကျန်းမာရေးကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ဘာတွေနဲ့ ကျောင်းတက်ခွင့် မရခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်း အားငယ်ခဲ့တယ်။ ဆရာမတွေ ခေါ်ပြီးတော့ အိမ်မှာပဲ တက်ခဲ့ရတယ်။ စာမေးပွဲဖြေမှ ကျောင်းကို သွားဖြေရတယ်။ အမြဲတမ်း ပထမဆု ရခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က မီလာကို ကျောင်းမတက်လို့ဆိုပြီး ဒုတိယပဲ ပေးတယ်။ ဒီ US မှာကြတော့ မီလာလိုလူမျိုးကို အမြဲတမ်း ပထမ ဦးစားပေးပါတယ်။
မေး ။ ။ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ဆက် ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ မီလာက ဒီအယ်လ်ဘမ် ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အများကြီး ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီးတော့လည်း လုပ်ချင်တာတွေ ရှိသေးတယ်။ လုပ်စရာတွေကတော့ အများကြီးပါ။
မေး ။ ။ အခုလို အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လာမယ့် လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာဖြစ်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒီလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တာကတော့ မီလာက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဝါသနာပါလို့ပါ။
မေး ။ ။ နှလုံးသားရေးရာကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူ ရှိနေပြီလား။
ဖြေ ။ ။ အခု လောလောဆယ်တော့ မရှိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် မီလာရေးတဲ့ သီချင်းတွေကတော့ အချစ်အကြောင်းတွေ ပါပဲ။
မေး ။ ။ မြန်မာသီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်လား။ မြန်မာ အဆိုတော်တွေထဲမှာရော မီလာကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်တွေ၊ Music အဖွဲ့တွေ ရှိလား။
ဖြေ ။ ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ လေးလေးဝါး၊ ကဗျာဘွဲ့မှူး၊ အေးချမ်းမေ၊ ပြီးတော့ Irron Cross တို့ကိုတော့ အမြဲတမ်း နားထောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အများကြီး နားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူး။ Irron Cross နဲ့ ဆုန်သင်းပါရ် တို့လောက်ပဲ နားထောင်ဖြစ်တယ်။ Music ကိုတော့ Irron Cross ကြိုက်ပါတယ်။
မေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခုနောက်ပိုင်း ဂီတလောကမှာ အဆိုတော်တွေ တော်တော်များများ ပေါ်လာပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမှုတွေနည်းပြီး ကော်ပီ သီချင်းတွေ များနေတဲ့အပေါ် မီလာက ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သီချင်းရေးပြီး ဆိုတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ မီလာကတော့ ထင်ပါတယ်။ မီလာကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲလိုမျိုး ဝါသနာပါတယ်၊ သူများ သီချင်း ကော်ပီကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မူရင်းခံစားမှု မရှိတော့ဘူးလေ။ မီလာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မူရင်းခံစားချက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ စတိုင်လ်နဲ့ ဖြစ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။
မေး ။ ။ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့ အဓိကသော့ချက်က ဘာဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကိုယ့်ရဲ့ မူရင်းဖန်တီးမှုတွေကို အားထုတ်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့ လို့ထင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မလဲ။ သီချင်းဆိုဖို့ အတွက်လား။
ဖြေ ။ ။ ရှိပါတယ်၊ ဒီနှစ်မဖြစ်လို့ရှိရင် နောက်နှစ်လောက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ မီလာက အရမ်းပြန်ချင်တယ်။ ကြိုးစားတော့မယ်။ သီချင်းဆိုနိုင်ဖို့ အတွက်ကိုလည်း ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ။ အရမ်းပြန်ချင်တယ်။
နောက်တခုက မီလာက တကယ့်အဆိုတော်ကြီး မဖြစ်သေးဘူး၊ ဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက မီလာကို ဝိုင်းပြီး အားပေးကြတယ်။ မီလာ အရမ်းပျော်တယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်တယ်။ မြန်မာစကား ပီပီသသ မပြောတတ်တာကိုတော့ နားလည်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ မီလာ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတဲ့ စိတ်တွေဖြစ်ဖူးလား။
ဖြေ ။ ။ မြန်မာပြည်ကိုတော့ အရမ်းလွမ်းတယ်၊ ပြန်ချင်တယ်။ အိမ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်း မမှတ်မိပါဘူး။ မီလာက ဆေးရုံတွေမှာပဲ အနေများခဲ့တော့ မှတ်မိတာက ရန်ကုန်က ဆေးရုံတွေပါပဲ။ ချင်းပြည်နယ်ကတော့ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ထွက်လာတာ ဆိုတော့ ဘာမှ မမှတ်မိတော့ဘူး။
မေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မသန်စွမ်း ဖြစ်နေတဲ့လူတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ သူတို့တွေအတွက် မီလာပြောချင်တဲ့ စကားရှိလား။
ဖြေ ။ ။ ရှိပါတယ်၊ သူတို့ကို အားမငယ်ရအောင်၊ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိအောင် သူတို့အတွက် လမ်းပြနိုင်တဲ့ လူတယောက် ဖြစ်ချင်တယ်။ မီလာက သူတို့အတွက် လမ်းပြပေးချင်တယ်၊ သူတို့ကိုလည်း ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကြိုးစားမှုက အဓိကဆိုတာ ပြောပြချင်တယ်။
ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးအပေါ် သူတို့အမြင်ဖိုးသောကြာရဲ့ စတိုင်သစ်နဲ့ဆိုဟန် ၂၀၁၃ မကုန်ခင် ကြားရတော့မလားအင်္ဂလိပ်သီချင်း ဝါသနာရှင်များကို Singing For Flying က ဖိတ်ခေါ်ကာတွန်းရုပ်ပြ ဈေးကွက် ဘာကြောင့် ပျက်ရတာလဲဆယ်နှစ်ပြည့်9planets ရော့ခ် စင်တင်ပွဲ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပမည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> thi ha January 17, 2013 - 3:45 pm	ကေင်းကင်ရင်ခွင်
Reply	Adam January 17, 2013 - 6:19 pm	I salute you with lots of admiration… ကျွန်တော် Milla ကို အရမ်းပဲလေးစား ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…You have my support at least on Youtube. That’s for sure…!
Reply	Sandra Lin January 17, 2013 - 10:26 pm	It is “Tate music group” not “Tape Music Group”, which seems to beavanity record label/vanity press. What is its business model? They will contact budding musicians and offer to produce album for an upfront fee. I search on internet and it seems to me that this company charges about 2000 US dollars. You have to be careful with these kinds of companies as some fail to do proper promotion and distribution of you album which are very important for its success and usually the most expensive part of music production. Always doathorough google search.
This is true only if you sign up with major record labels (Universal, Sony and Warner music groups) or Indie ones. A vanity record label will produce an album for you as long as you pay an upfront fee.
Reply	J Z Zaw January 20, 2013 - 4:30 pm	Yes,u r right.I worry for her too.Or,she know it and she know nothing to lose.Ko chin sar par tal,but…..Don’t give up until you got enought experienced Milla.Time will answer.Age will talk.haha.Congratulation for this news.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 18, 2013 - 4:00 am	မီလာကို အပြည့်အ၀ အားပေးပါတယ်။ မြန်မာလို ပီပီသသ မပြောတတ်တာ တောင်းပန်လိုက်ပုံကြောင့် အရမ်း ပိုလေးစားသွားပြီ။ မြန်မာလိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ပြောပါ။ ချင်းစကားလဲ ပြောပါ။ မြန်မာပြည် ဂီတလောကက ကော်ပီအဆိုတော်တွေပဲ ဦးစီးနေတာပါ။ မီလာတယောက် အမေရိကားမှာ ထုတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေကို မြန်မာလို၊ ချင်းလိုလဲ ပြန်ထုတ်နိုင်စေချင်ပါတယ်။
မီလာ ပြောသလိုပဲ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူ၊ ချို့တဲ့သူတွေကို နှိမ့်ချလိုကြတာ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ၊ သေးသိမ်တဲ့ အတွေးအခေါ် အပြုအမူတွေပါ။ တကယ်ဆို ပိုပြီး ဦးစားပေး၊ ကူညီမှု ပြုသင့်တာပါ။ အမေရိကားမှာ ဆိုရင် မသန်မစွမ်းသူတွေကို အလွန် အရေးပေးပါတယ်။ မသန်မစွမ်းသူတွေကလဲ လိုသလောက်ပဲ ကူညီမှု ယူပြီး မခံချင်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၊ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ကျိုးစားမှုတွေ၊ အောင်မြင်တာတွေက အတုယူစရာတွေပါ။
နောက်တခုက မီလာ ပြောသလိုပဲ အမေရိကားမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ပိုက်ဆံရှိရင် အယ်လ်ဘမ် ထုတ်လို့ ရပါတယ်။ (ဘယ်သူမှ ၀ယ် အားပေးမှာတော့ မဟုတ်ဘူး)။ အခုလို တေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက စတင် ဆက်သွယ်လာတယ် ဆိုတာ တော်ရုံ အဆင့် မဟုတ်လို့ပါ။ သည်မှာ လူတိုင်းနီးပါး သီချင်းဆိုတတ်ပါတယ်၊ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သီချင်းဆိုတတ်တိုင်း၊ အသံကောင်းတိုင်း အယ်လ်ဘမ် ထုတ်လို့ မအောင်မြင်ပါ။ တေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ အလကားနေရင်း သူတို့ ပိုက်ဆံ မဖြုန်းပါဘူး။ ဖြစ်ထွန်းနိုင်သူကိုသာ ရှာဖွေ ရင်းနှီးတာပါ။
မီလာ အမေရိကားမှာရော၊ မြန်မာပြည်မှာပါ အောင်မြင်ပါစေ။
Reply	J Z Zaw January 20, 2013 - 4:43 pm	TYT,I like ur nice and clean comment.But,you should know what is Tate music group background and level in USA.I don’t want t comment for this.But,I can’t shut my mouth.Anyway,Cheers Milla.Try hard and think hard.
Reply	Mualcin January 18, 2013 - 7:20 am	Life, sometimes, seems unfair. However, instead of giving up, there is always way to exit into success. But to have success, it takes courage, effort and most importantly, faith. Congratulations!
Reply	Sakda Pawsoe January 18, 2013 - 10:10 am	Apparently there are many hidden and unearth GEMS are in Burma… Just need to open up the space for them to come out… ESPECIALLY in tribal areas where there are fighting … KEEP IT UP Milla Hniang… So proud of you!!!
Reply	thawdar January 18, 2013 - 11:52 am	တော်လိုက်တာဗျာ။ဂုဏ်ယူပါတယ်။ကဲကျောင်းဆရာမတွေရေ။ကျောင်းမတက်လို့ဒုတိယဘဲပေးတယ်။အမေရိကားမှာတော့ဒီလိုလူတွေကိုဥိးစားပေးတယ်နော။ယဉ်ကျေးတဲကလူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဒါကိုဆိုတာထင်ပါရဲ့ဗျာ။
Reply	Htet aung hlaing January 18, 2013 - 9:11 pm	I support you…. very proud of you…
Reply	lhdfy January 18, 2013 - 10:35 pm	ဒီဆောင်းပါးက လူပဲကြာ်ငြာနေတယ် သီချင်းအမြည်းတော့မပေးဘူး။
Reply	Mr Kian January 20, 2013 - 2:25 pm	you can watch in YOUTUBE. OK
Reply	Ko Khine January 26, 2013 - 10:34 pm	မီလာတယောက် အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုတော် တယောက်ဖြစ်ပြီး သက်တော်ရှည်ပါစေ ။ ဒီထက်မက အောင် မြင်ကျော်ကြားနိုင်ပါစေ ။
Reply	minko February 3, 2013 - 3:36 pm	မြန်မာတွေ နွားခြေရာခွက်ထဲက ရေ ကို သမုဒ္ဒရာကြီးလို့ မထင်နေနဲ့ -ကိုယ်တိုင်လဲ မရောက်ဖူး-နိုင်ငံတကာဗဟုသုတတွေ မသိဘဲ-ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့ လို့အလကားနေရင်းကြွားမနေကြနဲ့ - နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းချင်ရင် – တန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဘို့ လိုပါတယ်။